अर्थमन्त्री जनार्दनले गर्न थाले कमाल, ओली सरकारले १ बर्षमा गर्न नसकेको काम १ दिनमै भ्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही ! – Enepali Samchar
July 18, 2021 July 18, 2021 adminLeaveaComment on अर्थमन्त्री जनार्दनले गर्न थाले कमाल, ओली सरकारले १ बर्षमा गर्न नसकेको काम १ दिनमै भ्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही !
enepaalisamchaar // काठमान्डू। नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार लोकप्रिय बन्ने संकेत देखिएको छ । देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै त्यस्तो छनक ल्याएपछि उनको प्रशंसा सुरु भएको हो ।लामो समयदेखि भत्ता नपाएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको माग पुरा भएको छ ।
दुर्गममा गएर काम गरेका उनीहरुले विगत १ वर्षदेखि पाउनुपर्ने भत्ता लगायतका पारिश्रमिक नपाएको गुनासो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म पुगेपछि उनले तत्काल समस्या समाधान गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनपछि बुधबार उनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न ८ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा हरि पराजुलीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय
कोरोना महामारीमा जोखिमपूर्ण काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताका लागि ६५ करोड १४ लाख बजेट स्वीकृत गरेका छन् ।
सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बीर अस्पतालमा फ्रन्टलाईमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको एक बर्षदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरे पनि वीर अस्पतालले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
देशको विकास निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्याप्त मौज्दात भएपनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाले समस्या निम्त्याउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्यातको मात्रा बढाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । देशमा निर्माण वा उत्पादन हुनसक्ने सानो भन्दा सानो माल वस्तु पनि महङ्गोमा आयात भइरहेको गर्भनर अधिकारीले बताए ।
काठमाडौंको यी ठाउँहरुमा २५००तिरे पछि १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती!